टाउकै फोरे पनि बाबुरामजीले छोड्दैनन् :: डा. शेखर कोइराला – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
१४ कार्तिक २०७७, शुक्रबार ०७:२९ English
० राजनीतिक निकासको खोजी जति–जति गरिँदैछ त्यति–त्यति सम्भावना टाढिएको देखियो, वर्तमान समस्याको निकास के ?
– ट्वाक्क भन्नुपर्दा त निकास चुनाव नै हो । राष्ट्रियसहमतिको सरकार बनाएर संविधानसभाको निर्वाचन गर्ने नै हो । तर जुन सरकारले चुनावको मिति तोकेर पनि गराउन सकेन यसले अब चुनाव नै गराउँदैन भन्ने मेरो विश्लेषण छ । प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई चुनाव चाहँदैनन् । एमाओवादी पार्टी या यसको नेतृत्व चुनाव चाहँदैन । यस अन्तर्यले मुलुकमा राजनीतिक जटिलता थपिरहेको छ । निकासका लागि त एमओवादीले एकलौटी ढङ्गको सर्वसत्तावादी प्रवृत्ति छोड्नुपर्छ, सबैको सुन्नुपर्छ र लोकतान्त्रिक ढङ्गले सहमतिबाट अघि बढ्न तत्पर हुनुपर्छ ।
० एमाओवादी नेतृत्वले चुनाव नचाहेको किन होला, काङ्ग्रेसको विश्लेषण के छ ?
– हामी माओवादीलाई लोकतान्त्रिक शक्तिका रुपमा रुपान्तरण भइरहेको छ भन्न चाहन्छौँ तर उनीहरुको क्रियाकलापलाई हेर्ने हो भने दण्डहीनतालाई उसले पश्रय दिइरहेको छ, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग नबनेको कन्टेस्टमा एमाओवादी जसरी अगाडि बढिरहेको छ, फौज्दारी मुद्दाका दोषीहरुलाई उन्मुक्ति दिने (उनका पक्षका त्यस्ता ७–८ सय दोषी त छुटिसकेको बुझिन्छ), मुद्दा फिर्ता लिने क्रम र प्रयास त्यत्तिकै गरिँदैछ । बाबुरामजी पूरै हुकुमी शैलीमा काम गरिरहेका छन् । न्याय–अन्यायको निक्र्योल छैन मनमौजी र एकपक्षीय शैली छ उनको । विभिन्न निकायका प्रमुखहरुलाई हुकुमी शैलीमा हटाएर आफ्ना मान्छे भर्ती गर्ने उपक्रम सुरु गरेका छन् उनले । यसले एमाओवादी नेतृत्व लोकतन्त्रमा पटक्कै विश्वास गर्दैन, हामीले जतिसुकै लोकतान्त्रि पद्दतिमा हिँड्न प्रेरित या पहल गरे पनि कुकुरको पुच्छर बाह्र वर्ष ढ्ङ्ग्रोमा राखे पनि बाङ्गोको बाङ्गै भनेझैँ अवस्था हो भन्ने पुष्टि भएको छ । अलोकतान्त्रिक शक्तिले लोकतान्त्रिक हतियार निवाचनलाई सजिलै कहाँ पो स्वीकार गर्छ र ?
० तपाईंहरुले पहिले किन विश्वास गर्नुभयो त माओवादीलाई ? दिल्ली गएर प्रचण्ड र बाबुरामहरुसँग सुरु–सुरुमा वार्ता गर्ने त तपाईं पनि हो नि ?
– म होइन भन्दिनँ । त्यसो गर्नैपर्ने वाध्यता थियो । बाध्यता यस मानेमा किसशस्त्र द्वन्द्व गरिरहेको माओवादीलाई लोकतान्त्रिक मूलधारमा ल्याउने प्रयास थियो त्यो । सही इन्टेन्सनले गरिएको हुनाले त्यसो गरेर हामीले गल्ती ग¥यौँ भन्ने मान्दिनँ म । गल्ती त उनीहरुले नै गरे जसले सच्चिने कसम खाएर पनि सच्चिन चाहेनन्, मौका पर्नेवित्तिकै फेरि लोकतान्त्रिक मर्ममाथि पहार गर्ने कुचेष्टा गरे ।
० यसको मतलब तपाईंहरुले गरेको कामको परिणाम सही आएन होइन त ?
– हेर्नुस्, एक्काइसौँ शताब्दिमा लोकतन्त्रको विकल्प त छँदैछैन, लोकतन्त्रको विकल्प भनेको अझ बढी लोकतन्त्र मात्र हो । उहाँहरु प्रेस फ्रिडमलाई पनि नमान्ने, दण्डहीनतालाई पनि पश्रय दिने, सम्पत्तिमाथिको अधिकारलाई पनि नमान्ने, आफैले निर्णय गरेका कुराहरु पनि नमान्ने र फौज्दारी मुद्दा लागेकाहरुलाई पनि आफ्ना मान्छे भन्दै छोड्ने जुन प्रक्रिया अवलम्वन गर्दैहुनुहुन्छ यसले उहाँहरु लोकतन्त्रप्रति पटक्कै प्रतिवद्ध नरहेको देखाउँछ । यसमा हामीलाई दुःख लागेको छ कि हामीले त्यत्रो प्रयत्न र विश्वास गरेर पनि उहाँहरु लोकतानित्रक परिवर्तनको पक्षमा आउनुभएन ।
० प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले बारम्बार आफू लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको पक्षपाती रहेको दोहो¥याएका दोहो¥यायै छन्, तपाईंहरु भने यस्तो आरोप लगाउनुहुन्छ, किन ?
– लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको पक्षपाती हुँ भनेर मुखले फलाकेर मात्र हुँदैन त्यो त एक्सनमा पो देखिनुपर्छ । उहाँहरुको व्यवहार कहाँनेर लोकतान्त्रिक देखिएको छ त ?
० भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा त तपाईंहरुले उहाँजत्तिको बुझेको र लोकतान्त्रिक व्यक्ति अरु छैनन् प्रधानमन्त्रीका लायक भनेर भनेकै हो नि, किन चिन्न नसकेको त ?
– हो, हो । भनेको होइन भनेर हामीले भनेका छैनौँ, भनेकै हौँ । उहाँजस्तो मान्छेले सारा दुनियाँलाई यसरी मनमा एउटा कुरा र बोली–व्यवहारमा अर्को चाल चलेर छक्याउने प्रयास गर्नुहोला भन्ने हामीले कल्पना गर्न सकेनौँ । यो हाम्रो कमजोरी नै भयो भन्ने मान्नुपर्छ यतिबेला । बाबुरामजीको असलियत चिन्न सकेनौँ हामीले । त्यसैले हामी उहाँलाई आन्दोलन गरेर हटाउन पनि त खोज्दैछौँ नि π
० अब के प्रधानमन्त्री भट्टराईलाई सडकबाट हटाउन सक्नुहोला तपाईंहरुले ?
– नैतिकता भए त उहाँ अफैँ हटिदिनु पर्ने हो, त्यो देखिएन । त्यसैले हामीले लोकतान्त्रिक अभ्यासमा आधारित भएर विरोधमा सडकमा उत्रने हो जो दैलेखबाट सुरु पनि भइसकेको छ । अब देशभरी नै बिरोध कार्यक्रमहरु फैलिँदैछ, यसरी नै जनतालाई हामीले सुसुचित गर्नुपर्छ कि यो सरकार कति भ्रष्ट छ, यो सरकारले के–के गलत कामहरु गरेको छ, यो सरकार किन देश र जनताको पक्षमा छैन र किन यसलाई हटाउनै पर्छ भनेर ।
० भन्नुस् त तपाईंहरुले आह्वान गर्दैमा जनता किन आउने सडकमा ?
– एउटा कुरा स्पष्ट बुझ्दा हुन्छ कि नेपाली काङ्ग्रेस सरकारमा जान या सरकारको नेतृत्व लिन लालायित छैन, आफू सत्तामा जानका लागि यो आन्दोलनको कुरा गरिरहेको छैन काङ्ग्रेसले । राष्ट्रिय सहमति बनाएर संविधानसभाबाट संविधान निर्माण होस भन्ने हाम्रो मकसद हो । जनतालाई लोकतन्त्र दिलाउनका लागि यसले वर्षौंदेखि संघर्ष गर्दैआएको छ र लोकतन्त्रक शासनव्यवस्थाको सुनिश्चितता नभएसम्म लडिरहने कर्तव्य बोध गरेको छ काङ्ग्रेसले । लोकतान्त्रिक पद्दतिका लागि नै आन्दोलन गर्नु अपरिहार्य भएको हो यतिबेला ।
० सभापतिलाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रुपमा किन अगाडि सारेको त सरकारको नेतृत्व लिने लालसा होइन भने ?
– आफ्नो सभापति या अन्य कुनै नेतालाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि नेपाली काङ्ग्रेसले आन्दोलनको कुरा गरिरहेको भन्ने कसैले नठानून् । हाम्रा सभापतिले प्रधानमन्त्री पद खोज्नुभएको होइन र काङ्ग्रेसले प्रधानमन्त्रीको नाम दिन खोजेको पनि होइन । यसमा त भन्ने नै हो भने एमालेले पनि अलिक बदमासी ग¥यो, एमाओवादीले र मधेसी मोर्चाले त ग¥यो–ग¥यो । उनीहरुले ‘नेपाली काङ्ग्रेस नाम देउ–नेपाली काङ्ग्रेस नाम देउ’ भनेर हरदम रट लगाएकोले मात्र नाम अघिसार्नु परेको हो ।
० भनेपछि एमालेसहित भएर एमाओवादी र मधेसी मोर्चाले जिल्ल्याए तपाईंहरुलाई, चिनेको थिएन काङ्ग्रेसले उनीहरुलाई ?
– नचिनेको–नजानेको होइन सबैलाई बुझेको छ काङ्ग्रेसले । तर, चिन्दाचिन्दै पनि कहिलेकाहीँ बाध्यता पनि पर्छ, जान्दाजान्दै कहिलेकाहीँ गल्ती पनि हुन्छ । हामीबाट पनि मिस्टेक भयो । मेरो व्यक्तिगत कुरा गर्नुहुन्छ भने त यसरी नाम अघिसार्नु हुँदैन भनेर बारम्बार भन्दै आएको थिएँ र त्यो निर्णय भएको दिन म काठमाडौंबाहिर भएकोले बैठकमा उपस्थित हुन सकिनँ । उपस्थित भएको भए बिरोध गरेर रोक्ने प्रयास पनि गर्ने थिएँ । बाहिरैबाट पनि फोनमार्फत सभापतिज्यूलाई यसका लागि नहतारिन सुझाव दिएको थिएँ ।
० तपाईंको मतलब काङ्ग्रेसले नाम दिएर गल्ती ग¥यो, होइन त ?
– व्यक्तिगत रुपमा त म त्यही ठान्छु तर नाम दिइसकेपछि त्यसमा त अब हामीले अडान राख्नै पर्छ । नत्र त पार्टीको साख गिर्न सक्छ । यहाँनेर एकदम ध्यान राख्नुपर्ने कुरा के छ भने जब सुशील कोइरालाको नाम आधिकारि रुपमा काङ्ग्रेसले तया ग¥यो तब प्रचण्डजी र मधेसी मोर्चाका नेताहरुले के भन्न थाले भने सुशील कोइराला त बाह्रबुँदे सहमतिका विरोधि, सुशील त संघीयताका विरोधि, गणतन्त्र विरोधि ! यो कुनै राजनीतिक नैतिकता हो ? उनीहरु जानाजान क काङ्ग्रेसलाई फसाउने र तल पार्ने खराब उद्देश्यले मात्र परिचारित रहेछन् भनेर बुझ्ने कि नबुझ्ने अब ? उनीहरु सहमति होइन अराजकता निम्त्याएर त्यसैको आडमा सत्ता लम्ब्याउन मात्र चाहिरेका छन् भन्ने प्रस्ट भयो कि भएन अब ? यस्तोमा अब नाम फिर्ता लिएर पछि हट्ने कुरा त आउँदैआउँदैन ।
० प्रचण्डजीले त कुनै स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउँ भनेर प्रस्ताव गरेका छन्, यो ठिकै होला नि हाृइन र ?
– एउटा खुलासा म गरिदिन चाहन्छु, रेकर्ड राखे हुन्छ कि प्रचण्डजीहरु या उनको पार्टी चुनाव चाहँदैन । चुनाव गराउनका लागि उहाँहरु चुनावको कुरा फलाकीरहनु भएको होइन । जुन चिज नगर्नु छ त्यसलाई गर्छौं–गर्छौं भनेर कुर्लिएपछि दुनियाँको नजरमा आफू त्यसको साखुल्य देखिन सकिन्छ भनेर मात्र उहाँहरुले निर्वाचनको कुरा गरेको हो । यदि काङ्ग्रेसले ‘लौ त लोकतन्त्रप्रति प्रतिवद्ध भएको कुनै स्वतन्त्र व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाएर जाऔँ’ भनेर प्रस्ताव ग¥यो भने हेर्नुहोला भोली उनीहरुले फेरि अर्को खालको बखेडा अगाडि सार्नेछन् र आफैंले आज गरेको स्वतन्त्र व्यक्तिको प्रस्तावलाई रछ्यानमा मिल्काउने छन् । यो कुनै सहमतिका लागि गरेको कुरै होइन । उहाँहरु छोड्न पटक्कै चाहनुहुन्न । म विश्वासका साथ भन्छु कि जतिसुकै टाउको फोरे पनि सहमति या स्वेच्छाले बाबुरामजीले सरकार छोड्ने छैनन् ।
० सहमतिको विकल्प त छैन नि होइन र ?
– त्यो त छैन भनेकै हो तर सत्तामा हुनेहरु नै वातावरण बिगार्दैछन् त के गर्ने ? आन्दोलन हाम्रो रहर त होइन नि π त्यसैले अब हामी तीनवटा फ्रन्टमा लड्छौँ, एउटा, राष्ट्रपतिले भनिरहनुभएझैँ संवैधानिक हिसाबले, अर्को, जनतालाई सुसूचित गर्ने आमसभाहरु गर्ने र सरकारी गलत क्रियाकलापको भण्डाफोर गर्ने, सरकारलाई असहयोग गर्ने, अनि तेस्रो भनेको वार्ताबाट पनि सहमति र समाधान खोजिरहने ।
० वर्तमान परिवेश हेर्दा त आन्दोलनले निकास दिनसक्छ भनेर विश्वस्त हुन सकिन्न नि यातिबेला, कि कसो ?
– आन्दोलनले निकास दिँदैन भनेर छोडिदिने हो भने त यिनीहरुले न त कहिल्यै चुनाव गर्नेछन् न सर्वसत्तावाद र अधिनायकी शैलीबाट पछि नै हट्ने छन् ! देश रसातलमै प्रयाउने छन्, जनतालाई तड्पाउने छन् । यो सबैले बुझ्नु आवश्यक छ ।
० प्रचण्डजीले चुनावको विकल्प छैन, जेठमा भए पनि गराऔँ भनेर किन भनेका होलान् त ?
– प्रचण्डजीको काम आजकाल जनतामा भ्रम फैलाउने, देशलाई गुमराहमा राख्नेबाहेक केही देखेको छेन मैले । यस्ता व्यक्तिको बारेमा कतिपय मिडियाले पनि नबुझेर कभरेज दिने गरेकाले मैले अखबार पनि त्यति पढ्नै छोडिदिएको छु । विश्वासको आधार नै नराखी कुरा गर्ने यस्ता व्यक्तिले भनेको कुरामा विश्वास गरिरहने हो भने त अब हामी नै थेत्तरा बन्नेछौँ । प्रचण्ड–बाबुरामहरु सत्तामा छन्, मुलुक बनाउँछौँ भन्छन्, तर कतिबेला के बोल्नुपर्छ र बोलियो भन्ने हेक्का नै उहाँहरुलाई हुन छोडेको देख्छु म त । उहाँहरु सत्ता छोड्ने पक्षमा नभएकोले जेठमा चुनाव त हुँदैहुँदैन अब, म ठोकुवा गरेर भन्छु । पहिलेदेखि नै भनिआएको हो मैले यो कुरा ।
० कहिले हुन्छ त अब चुनाव ?
– कुरा मिलेर सक्दो चाँडो हुँदा कात्तिक–मङसिरतिर होला, नत्र त जतिसुकै प्रयत्न गरे पनि चुनावको सम्भावना नै छैन । काङ्ग्रेसले ‘ल हामी लिँदैनौँ तर बाबुरामले छोड्नुपर्छ’ भनेर भन्यो भने पनि बाबुरामजीले छोड्ने होइनन्, उनले नछोडेपछि कुरा मिल्ने अवस्था छैन, अनि कसरी हुन्छ चुनाव ?
१६ माघ २०६९, मंगलवार २०:०५ मा प्रकाशित